China TNCF3-series 3IN INC Servo Feeder Machine စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | Daya
၁။ leveling adjustment သည်အီလက်ထရောနစ်ဒစ်ဂျစ်တယ် display meter ဖတ်ခြင်း၊
2. မြင့်မားသောတိကျစွာဝက်အူအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောနှစ်လမ်းသွား handwheel အားဖြင့်မောင်းနှင်သည် width ကိုညှိနှိုင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်;
၅။ Feeding roller နှင့် correction roller များသည်မြင့်မားသောအလွိုင်းရှိသောသံမဏိများဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်း (hard chromium plating treatment);
6. ဟိုက်ဒရောလစ်နှိပ်လက်မောင်းကို device ကို;
၇။ ဂီယာမော်တာသည်ဖိအားပေးဘီး၏ ဦး ခေါင်းကိုမောင်းနှင်သည်။
၁၀။ အစာကျွေးမှုစနစ်ကို Mitsubishi PLC အစီအစဉ်မှထိန်းချုပ်သည်။
၁၁။ တိကျမှန်ကန်သောကျွေးမွေးခြင်းကို Yaskawa servo motor နှင့်တိကျသော planetary servo reducer တို့ကထိန်းချုပ်သည်။
နည်းပညာ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့်အရံပစ္စည်းကိရိယာများကိုလာဘ်ထိုးခြင်းနှင့်ထိုးနှက်ခြင်းတို့ကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ အရံပစ္စည်းကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေပြီးလုပ်အားခသက်သာစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ထုတ်လုပ်သူများကမျက်နှာသာပေးကြသည်။ လာကြတယ်၏အရံပစ္စည်းကိရိယာများခွဲ, လမ်းခွဲပစ္စည်းထိန်သိမ်း, ဖြောင့်စက်, တ ဦး တည်းဖြောင့်စက်နှစ်ခု, တ ဦး တည်းပစ္စည်းထိန်သိမ်းဆုံးမခြင်းလမ်းခွဲရှိပါတယ်။ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ကိုနို့တိုက်ကျွေးရေးစနစ်ထဲအတိုချုပ်မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။
တံဆိပ်ခေါင်းထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းတွင်ပစ္စည်းထိန်သိမ်းခြင်း၊ အဆင့်ညှိစက်နှင့်နို့တိုက်ကျွေးရေးစက်များပါဝင်သည်။ အကယ်၍ ဤစက်သုံးလုံးသည်အမှီအခိုကင်းလျှင်၊ စက်တစ်ခုစီ၏ပမာဏသည်မသေးပါ။ ထို့အပြင်ပုံမှန်ထုတ်လုပ်မှုကိုသေချာစေရန်စက်နှင့်စက်ကြားတွင်စောင့်ဆိုင်းရမည့်နေရာရှိရမည်။ ထို့ကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏areaရိယာကိုစိတ်ကူးနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုကြိုးတပ်ပြီးသည့်နောက်တွင်နေရာအနည်းငယ်သာကျန်ရှိနေသဖြင့်အော်ပရေတာများအနေဖြင့်အကျိုးခံစားခွင့်လမ်းလျှောက်ရန်အလွန်အဆင်မပြေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုမှာလမ်းခွဲအတွက်သုံးစက်တွေတ ဦး တည်းသို့ပေါင်းစည်း။ သီးခြားလွတ်လပ်သောတံဆိပ်ခေါင်းထုတ်လုပ်သည့်လိုင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကလေယာဉ်ကိုယ်ထည်သည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပြီးကြမ်းခင်းhalfရိယာထက်ဝက်ကျော်လျှော့ချခြင်းဖြင့်အလုပ်ရုံ၏နေရာကိုအပြည့်အ ၀ အသုံးချပြီးအော်ပရေတာများအနေဖြင့်လည်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအနှောက်အယှက်မဖြစ်စေရန်လုံလောက်သောလည်ပတ်မှုနေရာများရှိသည်။ နှင့်တံဆိပ်ခေါင်းထုတ်လုပ်မှု၏လုံခြုံမှုကိုတိုးမြှင့်။
အစာတစ်မျိုးတွင်သုံးယောက်သည်အစာကျွေးခြင်း၊ နို့တိုက်ကျွေးခြင်း၊ ဆွဲခြင်း၊ ပုံသွင်းခြင်း၊ ပုံသွင်းခြင်းနှင့်အခြားစစ်ဆင်ရေးများကိုပြီးစီးရန်လူတစ် ဦး တည်းသာလိုအပ်ပြီးအချိန်ဖြုန်းခြင်းသည်လည်းနည်းသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ရိုးရာသီးခြားဖြစ်သောသီးခြားလွတ်လပ်သောအမျိုးအစားတစ်ခုစီသည်လူတစ် ဦး စီတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ကူညီရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်လူအင်အားကိုချွေတာခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစွမ်းအားတိုးတက်စေရန်အထောက်အကူပြုသည်။
feeder တစ်ခုမှသုံးခုသည်ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကိုကျင့်သုံးသည်။ အဆိုပါ function ကိုစစ်ဆင်ရေးလုံးဝ console ကိုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုလက်ကိုင်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။ လူတစ် ဦး သည်အလွန်လူသားဆန်သည့်စစ်ဆင်ရေးကိုပြီးဆုံးနိုင်သည်။ feeder တစ်ခုမှသုံးခုသည်အစာကျွေးခြင်းအရှည်ကိုမတရားစွာသတ်မှတ်နိုင်သည်၊ roller ထဲသို့ ၀ င်ရန်အချက်အလက်များကိုလွယ်ကူစေရန် coil ၏ရှေ့ဆုံးကိုပြားစေပြီး၊ မော်တာသည်ဖိအားပေးလက်မောင်းကိရိယာများကိုမောင်းနှင်။ ကွိုင်အားလျော့ကျစေရန်တားဆီးနိုင်သည်။ အဆိုပါဖြောင့်ခြင်းနှင့်အစာကျွေးစက်တွေတူညီတဲ့ထိန်သိမ်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး, အခြေခံကျသူတို့၏အလုပ်၏ထပ်တူသေချာသေချာသောခြေစွပ်အကြားကြားကာလမရှိ။ ၎င်းသည်အစာကျွေးခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်း၏အမှားများကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးမြင့်မားသောတိကျမှု၏တောင်းဆိုချက်ကိုလည်းရရှိနိုင်သည်။
တစ်ခုချင်းစီတွင်လမ်းခွဲသုံးခုတွင်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်၊ ၎င်းသည်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်အဆင်ပြေသည်။ တင်ဆောင်ခြင်း၊ uncoiling နှင့် leveling နှင့် feed လုပ်ခြင်းအထိဖြစ်စဉ်များကိုလူတစ် ဦး တည်းကမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းပြီးစီးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီးအလွန်အမင်းတက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောသတ္တုများ၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ကစားစရာများနှင့်အလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်သည်။
လမ်းခွဲသူတစ် ဦး တွင်သုံး ဦး သည်အနိမ့်ကျသောနှုန်းနှင့်သက်တမ်းရှည်ရှိသည်
ရှေ့သို့ ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းလေထု Compressor
နောက်တစ်ခု: TNCF4-series 3IN INC Servo Feeder စက်